दलितका पीडा : मैले छाेएकाे पानी चल्दैन – Education Awareness
दलितका पीडा : मैले छाेएकाे पानी चल्दैन
१६ बैशाख २०७६, सोमबार १९:२७
बाजुरा, १६ वैशाख ।
गायक यश कुमारले गाएकाे गीत मैले छाेएकाे पानी चल्दैन ….निकै हिट भयाे । गीतका विषयमा विभिन्न टिका टिप्पणी पनि भयाे । जे हाेस् उनकाे गीत समाजकाे एउटा बिम्ब थियाे । तत्कालिन समाजकाे दलित र गैर दलितकाे विभेदलाइ उक्त गीतमा प्रस्तुत गरेका थिए । यस कुमारकाे गीत पुरानाे भैसक्याे तर, हाम्राे समाजमा जातका नाममा हुने विभेदकाे बाछिटा अझै बाँकी छ । बाजुराकाे अधिकांश गाउँमा अहिले पनि समस्या उस्तै छ ।
बाजुराका अधिकांस गाउँमा पिउने पानीका धारा जात अनुसार अलग अलग बनाइएका छन । पानीको मुहान एउटै भए पनि दलित र अन्य जातका लागि छुट्टा छुटटै धारा रहेका निर्माण गरिएको छ । बाजुराको छेडेदह गाँउपालिका २ पिपल गाँउमा एउटै गाँउमा बसोवास गर्नेका फरक जातका भएकै कारण फरक धाराको पानी प्रयोग गर्न वाध्य छन् । गाँउमा कुँवर, थापा, कुमाल र लुवार जाति बसोवास गर्दै आएका छन् । कुँवर, थापा क्षेत्री कथित उपल्लो जातीका मानिन्छन् भने कुमाल र लुवार दलित भनिन्छन् । थापा र कुँवर जातिको लागि एउटा धारा छ भने कुमाल र लुवारका लागि अर्कै धारा छ ।
मुहान एउटै भएपनि आफुहरु दलित भएकाले धारा फरक भएको जोगी कुमालले बताए । ‘थापा र कुवर जातिले आफुहरुले छोएको धाराको पानी नखाने भएकाले धारा अलग निर्माण गरेका हौ’ जोगीले भने । त्यति मात्र नभई धारा छोएमा गालि खानु पर्ने र हप्कि समेत खेप्नु परेको दलित समुदायको भनाई छ । गाँउमा सबै मिलाएर ४० परीवार बसोवास गर्दै आएका छन् । ति मध्ये १२ परिवार दलित समुदायका छन् । कहिले काही धारामा वालवालिकाले छोएमा समेत गालि खानु परेको स्थानिय तारा कुमालले बताइन् ।
दलित जातिले क्षेत्री जातिको धारामा पानी भर्ने, नुहाउने देखी लिएर छुन समेत पाउदैनन् । ‘यदि छोइछिटो भएमा गाली खानुपर्छ’ रुदे्र लुवारले भने ‘हामीहरु पुर्खौ देखीनै जातिय उत्पिडनमा पर्दै आएका छौ ।’ सार्वजनिक स्थल धारा, पाटि, पौवा, भोज, भतेरमा समेत दलितहरुले अपहेलित बन्नु परेको रुदे्र लुवारको भनाई छ । थापा जातिका अगुवा सुरत थापाले भने धाराहरु अलग भएपनि आफुहरुले त्यस्तो भेदभाब नगरेको दाबि गरे । बुढापाकाहरुले छुवाछुत मानेपनि आफुहरुले भने त्यस्तो केही नगरेको थापाको भनाई छ ।
धारा छोएमा खाली खानुपर्छ
समाजमा अझै पनि दलित जातिले छुएको पानी, खाना र घर भित्र बस्न नदिने रुढिवादी परम्परा रहि आएको छ । जिल्लाभरीनै अघिल्लो पुस्ताका ब्यक्तिहरुमा छुवाछुतले जरा गाड्दै आएको दलित अगुवा काशि बिकले बताएका छन् । जिल्लामा जातिय छुवाछुतको विरुद्धमा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुले वकालत गर्दै आएपनि परीवर्तन भने आउन सकेको छैन् । नेपाल सरकारले पनि जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सयाय) ऐन २०६८ लागु गरेको छ । नहकुल जोशी
जीम पश्चात केकी	३ श्रावण २०७६, शुक्रबार १८:२४
लण्डनमा गुड्ने ६० वटा बसको भित्तामा नेपाल	३ श्रावण २०७६, शुक्रबार ०८:५३
सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता	३१ असार २०७६, मंगलवार २०:१८
पढ्न मन लाग्दैन वा धेरैबेरसम्म टिक्दैन ? यी हुन् उपायहरू	२३ असार २०७६, सोमबार १८:४३
मैले देखेको पुरूष हिंसा	५ असार २०७६, बिहीबार २०:५९
पर्वत अस्पतालको सेवाहरुलाई प्रभावकारी बनाउंदै	२१ जेष्ठ २०७६, मंगलवार ०८:४०
सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता
वीरगञ्ज, ३१ असार । सशस्त्र प्रहरीले अघिल्लो आर्थिक.....
काठमाडौं, २१ असार । शनिबार दिउँसो काठमाडौं उपत्यकामा.....
सशस्त्र प्रहरी बलका १३ डीआईजीको सरुवा
काठमाडाैँ १ असार ।गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बलका.....
प्रहरीका १९ डीआईजीको सरूवा
काठमाडौं, १ असार । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका १९.....
बृद्धभत्ता १ हजार बढ्यो
काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले बृद्धभत्ता एक हजार बढाएको छ ।.....
Phone:- 977-9857655045 - 9808727900